Budata Tactical Battle Simulator APK maka Android
Budata Tactical Battle Simulator
Free Budata maka Android
Budata Tactical Battle Simulator,
Tactical Battle Simulator, nke e mere dị iche karịa egwuregwu agha nkịtị, na -adọta uche dị ka egwuregwu ịme anwansị pụrụ iche. Agha ịkpa oke nke ejiri atụmatụ aghụghọ mee atụmatụ na -echere gị.
Nime egwuregwu a, ebe enwere nkeji 80 dị iche iche, ị nwere ike bido agha site na ịhọrọ ndị agha ịchọrọ. Otu ọ bụla nwere atụmatụ na adịghị ike nke ya. Ị ga -ahọrọrịrị ndị agha kwesịrị ekwesị iji merie nnukwu mmeri na ọgụ dị egwu. Nihi ọla edo ị na -enweta, ọ ga -ekwe omume ịkpọghee nkeji ọhụrụ. I nwekwara ike kwalite ndị agha gị na ngwa agha maka ọla edo.
Na mgbakwunye na egbe, mma agha, akụ, tankị na ngwaọrụ dị iche iche, dragọn so na egwuregwu ahụ. Ka ị na -agbago elu, ị nwere ike iji ngwa ọgụ ndị a niile mgbe ị na -alụ ọgụ siri ike ma sie ike. Ekele maka ọtụtụ ụdị, ị nwere ike nwee ọgụ netiti ndị enyi gị. Site na imeri nọgụ ndị a, ọ ga -ekwe omume irite ọlaedo iji zụta nkeji na akụrụngwa ọhụrụ.
Tactical Battle Simulator, nke na -aga nke ọma na ngwaọrụ gam akporo na iOS ma na -enye gị nefu, bụ nnukwu egwuregwu simulator egwuregwu nke ihe karịrị nde ndị ọrụ 1 họọrọ.
Tactical Battle Simulator Ụdịdị
Mmepụta: Moustache Banana
Ugbo Simulator 18 bụ ihe ngosi ugbo kachasị mma ị nwere ike igwu na ekwentị gam akporo gị. Nime...
Truck Simulator 2018: Europe, mmepụta ụlọ, kpamkpam nasụsụ English, ọ bụghị naanị gam akporo;...
Trash Truck Simulator bụ ịme anwansị ụgbọ ala nke ị nwere ike iji na sistemụ arụmọrụ gam akporo rụọ...
Taxi Simulator 2018 bụ egwuregwu simulator kacha mma ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ekwentị...
Ihe owuwu simulator 2 bụ ịme anwansị ụlọ nke ị nwere ike ịnụ ụtọ igwu egwu ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji...
Jikere iji nweta ahụmịhe ịnya ụgbọ ala na Bus Simulator 3D, nke pụtara dị ka egwuregwu na -atọ ụtọ...
Bus Simulator: Ultimate bụ bọs ịme anwansị egwuregwu ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ekwentị...
Minibus Simulator 2017 bụ egwuregwu minibus ị nwere ike ịmasị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ahụmịhe ịnya...
Tactical Battle Simulator, nke e mere dị iche karịa egwuregwu agha nkịtị, na -adọta uche dị ka...
Ultimate Car Driving Simulator bụ egwuregwu ịme anwansị ụgbọ ala nwere eserese kacha mma ọ bụghị...
Farmville 3 bụ egwuregwu ịme anwansị nefu nke ị nwere ike igwu na ekwentị gị nwere sistemụ arụmọrụ...